Humusha iwebhusayithi ye-WordPress | Gtbabel
Indlela engcono kakhulu yokwenza isayithi lakho le-WordPress libe ngezilimi eziningi: lilungele womabili amawebhusayithi alula nayinkimbinkimbi. Ngosizo lokuhumusha okuzenzakalelayo ongakwazi ukukubuyekeza ngendlela ofisa ngayo.
Humusha iwebhusayithi yakho manje
I-plugin yokuhumusha yawo wonke umuntu
Ngosizo lwesixazululo sethu, ungakwazi ukuhumusha iwebhusayithi yakho ye-WordPress kunoma iyiphi inombolo yezilimi ngokuphazima kweso. Lokhu kukuvumela ukuthi ukhuphule ithrafikhi yedatha yamazwe ngamazwe, ufinyelele izethameli zomhlaba wonke futhi uvule izimakethe ezintsha: Ngaphandle kokuhlangabezana nezindleko eziphezulu zokuthuthukisa noma imizamo yokuyilungisa. Isixazululo sethu sinikeza imisebenzi ekhangayo kubo bobabili abaqalayo kanye nochwepheshe abangenayo yonke into.
Iseluleki sethu sokusetha sikuyisa kuwebhusayithi enezilimi eziningi emizuzwini emi-5. Ngaphandle kolwazi lokuhlela noma ukulungiswa kwetimu yakho. Uma sekusethiwe, okuqukethwe okusha kungahunyushwa ngokuzenzakalelayo uma uthanda: Futhi ungagxila ekuthuthukiseni okuqukethwe okusha.
Icabangela yonke into edingekayo kuwebhusayithi enhle, elungiselelwe i-SEO yezilimi eziningi: Kungakhathaliseki ukuthi ukuhumusha kwesihloko, incazelo ye-meta, ama-slugs, ama- hreflang tags, izibaluli ezinde ze-HTML: I-Google izojabula. Siphinde sihambisane nama-plugin amakhulu we-SEO.
Kubo bonke ochwepheshe, sinikeza imisebenzi efana nokuhumusha kwe-XML/JSON, izaziso ze-imeyili, ukuhumusha kwe-imeyili/PDF, ukuthekelisa/ukungenisa ngamafomethi amaningi wamafayela, ukuzivumelanisa nezinkonzo ezihlukahlukene zokuhumusha nokunye okuningi okungekho enye i-plugin emakethe okunikezwayo. .
Siwukuphela kwesixazululo se-plugin esinikeza ukuhumusha okuzenzakalelayo kokuqukethwe kwakho okukhona - ​​ngokucindezela inkinobho. Ngalo lonke ushintsho lokuqukethwe, isevisi yesaziso se-imeyili ezenzakalelayo izokwazisa ngazo zonke izinguquko ezenziwe ngolimi lwendabuko. Futhi uma ufuna ukuthi ukuhumusha kubuyekezwe yisikhungo sokuhumusha esiphrofeshinali, ungakhipha konke ukuhumusha okuzenzakalelayo ngamafomethi ahlukahlukene futhi ukungenise futhi ngokucindezela inkinobho.
Ukuqhathanisa namanye ama-plugin ezilimi eziningi
Ukukhetha ubuchwepheshe obufanele kubalulekile ezindlekweni zokuthuthukisa ezisebenza kanye kanye neziqhubekayo kanye nempumelelo yephrojekthi, ikakhulukazi kumaphrojekthi amakhulu ewebhu. Izixazululo ze-plug-in ezisunguliwe emakethe zinezindlela ezahlukene zobuchwepheshe futhi ngokwemvelo zinezinzuzo kanye nokubi. Isixazululo sethu siqinisekisa ngezici ezihlukahlukene eziphezulu futhi sihlanganisa izinzuzo zezixazululo ezikhona ze-plugin emakethe ye-WordPress.
Gtbabel I-WPML I-polylang HumushaCindezela MultilingualPress GTranslate
Humusha lonke ikhasi
Izilimi zomthombo eziningi
Isevisi yokuhumusha yomuntu ngamunye
Ama-LPs aqondene nezwe
Izindleko zonyaka ngesibonelo ngasinye (cishe.) 149 € 49 € 99 € 139 € 99 € 335 €
Ihambisana nama-plugin akho, amatimu namalabhulali
Qala ukuhumusha iwebhusayithi yakho namuhla
Kungakhathaliseki ukuthi i-ejensi yewebhu, inkampani yokukhangisa, i-ejensi yokuhumusha noma ikhasimende lokugcina: Sinephakheji elifanele lazo zonke izimo kuphothifoliyo yethu: Ngenguqulo yamahhala kuze kufike kulayisense yebhizinisi ngalinye, zonke izinketho zivulekele wena - futhi ngentengo ekhanga kakhulu. Zikhethele iphakheji elikulungele futhi usebenzise ubuliminingi obuphelele kuwebhusayithi yakho namuhla.
Izibuyekezo zonyaka ongu-1
€ 149 ngonyaka
Zonke izinzuzo ze-PRO
Kunoma iyiphi inombolo yamawebhusayithi